Akụkọ - Ndị bi na Bordentown na-enweta Nwanyị Scout Gold Awards
Oge ntozu nwata mere ka umu nwanyi 2 Bordentown nweta ihe.
Alison Wall na Emily Wheeler, ndị na-echegbu onwe ha banyere ndị otu nwanyị Scout na-achịkọta ọnụ kemgbe ụlọ akwụkwọ ọta akara, rụzuru atụmatụ Gold Award ha, onyinye kachasị mma n'ime mmemme mmepe ụwa maka ụmụ nwanyị.
Ndị 2 ahụ na-abanye na yr nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Bordentown Regional Excessive Faculty ma na-eche na afọ ha nke ịrụsi ọrụ ike ma nwee obi ụtọ na Nwanyị Scouts.
Wheeler nọ n'ime ndị nwanyị Scouts site na mama ya, na-agbaso usoro pụtara ogologo nke itinye aka na ezinụlọ ya. Nwanne ya nwanyị ntorobia, mama, nne nne na nne nne nne ya niile enweela nchegbu, o kwuru.
Wheeler si Gold Award ịma aka “Good Wheelers” e mezuru ihe karịrị afọ abụọ nkeji si n'oge okpomọkụ isi n'ime ya sophomore yr na-ada 2019.
Ebumnuche nke ihe ịma aka ya bụ ịgba ume na ịkụziri ndị mmadụ banyere nchebe igwe kwụ otu ebe, ma kwalite imegharị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ nke ochie.
O kpebisiri ike na ọ ga-abanye n'isiokwu a n'ihi na ọ maara nke ọma ihe ụkọ nchebe ọgba tum tum nwere ike ịpụta maka ezinụlọ. Nwanne nna ya enweela ihe ọghọm igwe abụọ, nke ọ bụla n'ime ha gara nke ọma ma na-eji ụgbọ ala agba ọsọ. Ọ bụ ezie na ọ gbakere site na ihe ọghọm ya, Wheeler kọwara nrụgide ọnọdụ ahụ e nyere ezinụlọ ya nakwa na ọ bụ "ọ bụ ihe siri ike nnabata
"Ekwenyere m na m bụ isi ihe bụ nanị inwe mmezi nsụhọ nke, na nanị na-ekere òkè nkebi ahịrịokwu nke otú dị mkpa igwe kwụ otu ebe nchebe na-atụ na nwere ike inwe ikike na-ebu ihe ọbụna ibu nsụhọ nke otú ọ dị mkpa," Wheeler kwuru. "N'ihi ya bụ ụgbọ oloko dị egwu. Ọ dị oke mma maka ikuku. Mana mgbe ndị mmadụ n'otu n'otu anaghị eme ya n'udo, mgbe ahụ enweghị ọkwa ga-adị n'ezie ịme ya."
Iji kpọsaa nchebe igwe kwụ otu ebe na mmata, Wheeler haziri ma sonye na igwe igwe ịnyịnya igwe 5 na Bordentown Township Police Bike Patrol. Ndị a na-eme njem ndị a banyere ihe dị ka mmadụ iri abụọ n'otu oge ma lekwasịrị anya na ịkụziri ndị na-agba ịnyịnya nke ugwu niile ntọala nke okporo ụzọ na ebe ị ga-enweta na obodo.
Iji na-azụ onwe ya n'usoro igwe kwụ otu ebe, Wheeler rịọrọ enyemaka nke ezi ezigbo enyi nwere ụlọ anaghị akwụ ụgwọ na Asbury Park. Mama Wheeler rụrụ ọrụ na Asbury Park ma kpụga ya na Second Life Bikes nke Kerri Martin nwere. N'ebe ahụ ka ọ matara ụzọ kachasị mma iji rụzie igwe kwụ otu ebe, gbanwee taya ma hụ ọrụ ebumnuche na-agagharị agagharị-na-ewere igwe igwe na-adịghị mma ma na-emegharị ma ọ bụ na-emezigharị ha maka onye ọ bụla nke ọzọ enweghị ike ị nweta igwe.
Mgbe o nwesịrị ihe ịma aka ya, Wheeler nyeere aka inweta ịnyịnya ígwè 25 nyere Martin aka.
Wheeler nyere aka ịhazi mgbakọ na nchekwa igwe kwụ otu ebe na Clara Barton Elementary Faculty na Peter Muschal Elementary Faculty. O nwere ike inweta ọkà okwu site na Cross Nation Connection, mgbazinye igwe kwụ otu ebe na ụlọ ọrụ egwuregwu, ịga nzukọ a na-adịghị mkpa ka ọ bụrụ akụkụ nke ya na oge nnọchi ya nke obodo.
Wheeler gara ememme na ememme ndị ọzọ iji soro ndị otu ya kerịta ozi ya banyere nchekwa ọgba tum tum. Na 2018 na 2019, o debere tebụl data na asọmpi ezighi ezi na ọdịda nke obodo ahụ, na mgbakwunye na ụbọchị otu ụbọchị na Chesterfield.
O kere egwuregwu vidiyo na-enweghị isi, akpa dị mma na onyinye dị iche iche, yana ndị na-egosipụta na okpu igwe, iji kpoo ndị mmadụ ịmụ nchekwa igwe kwụ otu ebe na ihe ịma aka ya.
N'ime afọ 2019 dum, ọ gara ahịa nke obodo Bordentown Metropolis n'ọtụtụ ihe.
Ọ bụ n'ahịa ndị ọrụ ugbo nke obodo ukwu ahụ ka Wheeler na Wall keere otu tebụl data iji gwa ìgwè ahụ banyere atụmatụ ha na ntinye aka ha na ndị nwanyị Scouts.
Ihe ịma aka Gold Award nke gbara afọ, "Mee n'èzí n'ubi ahụ," jikọtara ya ọnụ maka ihe nkiri na ọchịchọ ịmata ire ikike nkwukọrịta nke ndị na-eto eto.
O kere ndị na-eto eto site na klas ụlọ akwụkwọ ọta akara na nke atọ. N'ime mkpọ akpa, Mgbidi mere kaadị egwu na-adịghị mma nke gosipụtara ọnọdụ dị iche iche dị n'etiti ndị na-eto eto nwere ike ihu n'ụlọ akwụkwọ. Ha na-agwa ndị na-eto eto ka ha kpaa àgwà ka ihe si na ya pụta ma kesaa mmeghachi omume na mbọ ịmụ nkwukọrịta.
Ngwongwo ndi eji ebu ihe enye onyinye uwe na ihe eji egwuri egwu iji soro kaadị ihe ngosi.
O nwere ike inweta ngwongwo ngwugwu atọ na Peter Muschal Elementary Faculty, abụọ na Clara Barton Elementary Faculty na otu na Lawrence Elementary Faculty maka ngwugwu ya mgbe ọ gachara.
Wall letara ikike iji dokwuo anya ihe ịma aka ya na mkpa ọ dị maka ngwugwu na-esote ya na ndị na-eto eto. Ọ ga-abịa ọzọ na ntughari na mgbakwunye ma cheta ụdị obi ụtọ ụmụaka nwere ike ịhụ ya.
"Nke ahụ bụ otu ihe gosipụtara m n'ezie etu ihe ịma aka a siri metụta ụmụaka ole na ole," ka ọ kpọtụrụ aha.
Agbanyeghị na ọ na - echepụta echiche kemgbe nwa ọhụrụ ya, 2017, emezuru ihe ịma aka ahụ site na Jenụwarị 2019 ruo Febụwarị 2020.
"Ekwenyere m na mbụ m ghọtara n'ezie ihe Gold Award bụ ọzọ na ọkwa nke ise ma ọ bụ karịa," Wall kwuru. "Kemgbe ahụ m dị ka," Nke ahụ bụ otu ihe m chọrọ ịrụ ọrụ iji nweta. Nke ahụ bụ otu ihe m chọrọ inwe ebumnuche dị ogologo oge. "
Ebumnuche ya abụghị naanị inyere ụmụaka aka ka ha rụọ ọrụ site na ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya mana na mgbakwunye ihe nkiri ọkachamara na ịme ihe nwere ike ịbụ maka oge mbụ.
"Mmụọ nsọ nwetara ebe a si onwe nka n'ezie ebe nkiri mgbe nile nyere m ihe ngwọta ka categorical onwe m," Wall kwuru. "Ama m na ọtụtụ mmadụ gbalịsiri ike ime ihe ọfụma n'ihi nnweta nka na ụzọ ọtụtụ ndị mmadụ n'oge a ga-adị ọdịnaya ederede karịa ịgwa onye ọ bụla isi ruo n'isi. N'ihi ya, achọrọ m inyere ndị ntorobịa na-eto eto aka ịzụlite ikike nkwurịta okwu ndị a dị mkpa ebe inye ha ohere ha ga-eji dee ihe mere ha. ”
Wall na-echegbu onwe ya banyere ihe nkiri ihe nkiri kemgbe ngalaba ngalaba. Ya ikpeazụ n'ichepụta bụ highschool si spring musical 9 ka ise na February a yr. Maka ụlọ ọrụ a, ọ na-echegbu onwe ya na "nsọtụ ọ bụla nke ụdịdị dị iche iche" - mkpokọta, ọrụ ndị ọrụ, akwụkwọ edemede na ịtọlite ​​mmepe.
Dị ka ndị agha, Wheeler na Wall rụzuru nke mbụ Bronze na Silver Awards n'otu. Na Wheeler na Wall na-ekere oke karịa ọbụbụenyi ha na itinye aka na Troop # 23921. Onye ọ bụla n’ime ha bụ nne ha na ndị isi na-edu ndị agha ya.
Ha na-akwado maka afọ ikpeazụ ya nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma na-adị njikere ịbanye na ngalaba. Mgbidi na-eji kọleji ndị na-eweta nnukwu ọrụ n'ọkwa nchịkwa n'ihi ọchịchọ ịmata ya n'ihe nkiri na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Wheeler nwere mmasị site na ọrụ, ikekwe na-ere ahịa ọgbara ọhụrụ, na-atụ anya ịgba ọsọ nke ya n'ọdịnihu.